Ikhaya-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Imiyalezo yezulu yamaxesha ethu
Sukudelela amazwi abaprofeti,
kodwa mayivivinywe yonke into.
bambelela kokulungileyo ...
(I-1 Tessional 5: 20-21)
Ngokufa kukaMpostile wokugqibela, ukutyhilwa koLuntu kuphele. Konke okufunekayo ukuze usindiswe kutyhilwe. Nangona kunjalo, uThixo akayekanga ukuthetha kwindalo yakhe! I IKatekism yeCawa yamaKatolika ithi "nokuba iSityhilelo sele sigqibile, khange sichazwe ngokupheleleyo; ihlala ikukholo lobuKristu ngokuthe ngcembe ukuqonda intsingiselo yalo epheleleyo ekuhambeni kweenkulungwane ”(n. 66). Isiprofetho lilizwi likanaphakade likaThixo, eqhubeka nokuthetha ngabathunywa bakhe, iTestamente eNtsha ebabiza ngokuba "ngabaprofeti" (1 Kor 12:28). Ngaba ikhona into ethethwa nguThixo engabalulekanga? Asicingi njalo, yiyo ke le nto sidale le webhusayithi: indawo yoMzimba kaKristu yokuqonda amazwi aprofetaweyo. Siyakholelwa ukuba iBandla lisidinga esi siphiwo soMoya oyiNgcwele ngakumbi kunakuqala-ukukhanya ebumnyameni-njengokuba sibala ukuza koBukumkani bukaYesu.
isikhanyeli | Uluntu ngokuchaseneyo neSityhilelo saBucala | Uguqulelo lokuchasana
Kutheni Umphefumlo Ongalindelekanga?
Kutheni uEduardo Ferreira?
Kutheni uBawo uStefano Gobbi?
Kutheni uElizabeth Kindelmann?
USimona kunye no-Angela-Iyantlukwano enkulu
ICawe kuya kufuneka ijongane namaxesha amabi.
Pedro – Khusela iNyaniso
Abantu bamshiyile uMdali.
UMarco - Phila iVangeli eNgcwele
Thandazela uloyiso lweNtliziyo yam Engaguqukiyo.
IMedjugorje – iCandelo lomelele
Ububi busebenza emntwini kunanini na ngaphambili.
Bona yonke imiyalezo »
Iividiyo zamva nje
Ukumfamekisa uSathana ngeeSkapulari kunye neeSakramente
Fr. Umbono kaBlount weHlabathi umnyama Kathathu.
Umdlali weHollywood kunye nesohlwayo kunye nesilumkiso. UMartha Higareda udliwanondlebe noChristine Watkins--Icandelo 2
Bona zonke iividiyo »
Isilumkiso, kunye nokuRhoxiswa kunye noMmangaliso
Iimfihlakalo ezininzi zithethile ngexesha lembandezelo enkulu ezayo emhlabeni. Uninzi luye waluthelekisa noqhwithela njengesaqhwithi.
Funda umgca weXesha elipheleleyo
Kubekho iziganeko eziphambili "ngaphambili" kunye "nasemva" kwimbali yebhayibhile etshintshe ikhosi yobomi babantu eMhlabeni. Namhlanje, olunye utshintsho olukhulu lunokuba phezu kwethu kungekudala, kwaye uninzi lwabantu alwazi nto ngalo.
Ukuqonda uMnyango weNceba kunye noMnyango wezoBulungisa ngexesha leLiso leSivunguvungu ...
IMini yeNkosi ayisiyiyo imini engamashumi amabini anesine, kodwa ngokutsho kwaBaseki beCawe,
ixesha apho umhlaba uya kucocwa kwaye abangcwele balawule noKristu.
Funda umda wexesha elipheleleyo
Icawe iya kuncitshiswa kubungakanani bayo, kuya kufuneka ukuba uqale kwakhona ...
Isilumkiso kunye noMmangaliso ngoku emva koluntu, abo bangafunanga ukugqitha "kumnyango wenceba" ngoku kufuneka badlule "kumnyango wobulungisa."
Isiko eliNgcwele liyangqina ukuba, xa kuphela ixesha, indoda ethile uSt. Paul ambiza ngokuba "ngongenamthetho" kulindeleke ukuba inyuke njengo-Kristu wobuxoki emhlabeni, izibeka njengento yokunqulwa ...
Sifanele sithethe ngokungazenzisiyo: ngokomoya nangokokuziphatha, eli lizwe likwimeko elibi kakhulu kunangaphambili.
Eli lizwe liza kulibona kungekudala elona xesha liqaqambileyo legolide elakha lazibona ukususela kwiParadesi ngokwayo. KukuBuya koBukumkani bukaThixo, apho kuyakufezeka ukuthanda kwakhe emhlabeni njengasezulwini.
Icawa ifundisa ukuba uYesu, ngenene, uya kubuya esebuqaqawulini kwaye eli lizwe, njengoko sisazi, liza kuma kwindawo ekrwada. Okwangoku ayizukwenzeka ngaphambi kwedabi eliqatha, apho intshaba iya kwenza isigqibo sayo sokugqibela kulawulo lwehlabathi ...
Ngamanye amaxesha 'ukuBuya kweSibini' kubhekisele kwiziganeko ezikhoyo ezahluke ngokupheleleyo emzimbeni ka-Kristu ngokwasemzimbeni, ukubonakala, nokuza ngokoqobo enyameni emva kwexesha-Isilumkiso, ukumiselwa kwe-Era, njl.nanye ngamanye amaxesha Ukuza 'kubhekisa kuMgwebo wokuGqibela kunye noVuko lwaNaphakade oluqalwe phezu kokuza kwakhe ngokomzimba ekupheleni kweXesha.
Impilo, ukuphilisa kunye nokukhusela umzimba kunye nasekhaya.
Funda izithuba »
Ukuziqhelanisa nezinto zokomoya kunye nokukhusela wena kunye nabo ubathandayo.
I-MTS, i-LCSW, isithethi se-Katolika, umbhali othengisa kakhulu, i-CEO kunye nomsunguli we-Queen of Peace Media.
Funda i-bio epheleleyo »
Umbhali ongumKatolika, ibhlog, isithethi, kunye nemvumi / umbhali wengoma.
Ukuthandabuza okuxhaphakileyo kwicala labanye abacinga ngamaKatolika ukuba bangene kuvavanyo olunzulu lwezinto ezingabalulekanga ebomini, ndiyakholelwa, yinxalenye yengxaki abafuna ukuyiphepha. Ukuba ukucinga kwe-apocalyptic kushiywe ubukhulu becala kwabo baye baxhotyiswa okanye abaye baba ngamaxhoba othuselo lwe-cosmic, ke uluntu lwamaKristu, ngokwenene uluntu luphela, luhlwempuzeke kakhulu. Kwaye loo nto inokulinganiswa ngokubhekisele kwimiphefumlo yabantu elahlekileyo. -Author, Michael D. O'Brien, Ngaba siphila kumaxesha eApocalyptic?
Siyacela ukuba, ngelixa ufunda imixholo yale webhusayithi, bonke abafundi baqhubeka phambili ezingqondweni zabo ezi zinto zintandathu zilandelayo:
1. Asingobanqolobi bokugqibela kwinto eyintloko esityhilelayo — iCawe iyiye- kwaye siya kuhlala sizithobela nakuphi na isigqibo asithathayo. Yi kunye ICawe ke ngoko, "sivavanya" isiprofeto:Khokelwa yiMagisterium yeCawa, i sensid fidelium uyayazi indlela yokuqonda nokwamkela kwezi zityhilelo nantoni na ebiza ubizo lukaKristu okanye iingcwele zakhe eCaweni. ” (Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. 67)
2. Sobabini siyawamkela kwaye siwuhlonipha ngokunzulu umahluko phakathi kwembonakaliso yoLuntu kunye neyabucala, kwaye asiphakamisi nakuphi na okugqibela apha njengokufuna imvume efanayo neyangaphambili evela kwabathembekileyo.
3. Sihlala sivulekile ukuba siqwalasele ezinye iinkqubela phambili ezifanelekileyo ekuqondeni izityhilelo esizibandakanyayo, kwaye ngenxa yoko asibangi isiqinisekiso esipheleleyo kwisityhilelo ngasinye esikule ndawo, nangona sigqibe ekubeni umntu ngamnye ukufanele ukubandakanywa apha kwaye kubalulekile ukusasaza. Umthamo womxholo wale ndawo unqunyelwe ngaphakathi kwaye akukho nto kufuneka ithathelwe ingqalelo ekubeni kungabikho mboni inikwe amaphepha ayo.
4. Ngelixa sizithathela ingqalelo kakhulu into nganye eyityhiliweyo yabucala, ukuba ibonakala inokuthenjwa ngenxa yeendlela ezicacisiweyo zeCawe zokuqonda (ukufunda ngakumbi Cofa apha), ekugqibeleni sizama ukukhupha ukwahluka kwezityhilelo "imvumelwano yesiprofeto" yona engavukiyo okanye iwele kubunyani benye okanye ezimbini zeentsomi, kodwa endaweni yoko yenza ubizo olucacileyo loMoya kwiCawa namhlanje.
5. Sithathela ingqalelo ukuba nesityhilelo esizimeleyo sabucala kufuneka siphathwe ngokwemfundiso yeCawe. Apha, samkela ubulumko buka-Hannibal:
6. Iimboni zizixhobo ezinokusilela, kwaye ngenxa yoko, “… yonke into uThixo ayityhilayo ifunyenwe yenziwa nangokwemeko yesihloko. Kwimbali yesityhilelo sesiprofeto akuqhelekanga ukuba imeko yomprofeti enomda kunye nengafezekanga ichaphazeleka ngokwasemphefumlweni, isimilo okanye isiganeko somoya esinokuthintela ukhanyiselo lokomoya lwesityhilelo ekukhanyeni ngokugqibeleleyo emphefumlweni womprofeti, apho umbono womprofeti isityhilelo sitshintshe ngaphandle kwesizathu. ” (Newsletter, Abathunywa beTratu eNgcwele, ngoJanuwari-Meyi 2014). Ke ngoko, le webhsayithi ayisiqinisekisi lwayo yonke into ethethwe okanye yabhalwa ngumbonisi. Sijonga kuphela into ethunyelweyo Apha esekwe kwezi ndlela zingentla.
Kuyo yonke iminyaka iCawe ifumene uthando lwesiprofetho, ekufuneka luhlolisisiwe kodwa lungahlaziswa. -Ukhadinali Ratzinger (BENEDICT XVI), Umyalezo weFatima, iNkcazo yeTheology, www.v Vatican.va
Siyakubongoza ukuba umamele ngokulula kwentliziyo kunye nokunyaniseka kwengqondo kwizilumkiso ezinamandla zikaMama kaThixo… OoPontiffs baseRoma… Ukuba ngaba bangabagcini kunye nabatoliki besityhilelo esivela kuThixo, esiqulathwe kwiZibhalo eziNgcwele nakwiNkcubeko, bayayithatha Njengomsebenzi wabo ukucebisa ingqalelo yabathembekileyo-xa, emva kovavanyo olunenkathalo, bayigweba ngokulungelwa kwabo bonke-izibane ezingaphaya kwendalo nekumkholisileyo uThixo ukunika ngokukhululekileyo kwimiphefumlo ethile enamalungelo, hayi ukucebisa ngeemfundiso ezintsha, kodwa sikhokele kwihambo yethu. -SAIPOPOPE JOHN XXIII, Umyalezo weRadiyo kaPapa, nge-18 kaFebruwari ka-1959; L'Osservatore Romano
Ngaba ngabo sokwenziwa isambulo, kwaye ngubani na oqinisekileyo ukuba uvela kuThixo, ebophelelekile ukuba anike imvume? Impendulo ikwi-affirmative ... Lowo ke lowo ukutyhilwa kuye kwabhengezwa ngasese, kufuneka akholwe kwaye athobele lo mthetho okanye umyalezo kaThixo, ukuba ucetyisiwe kuye ngobungqina obaneleyo ... Kuba uThixo uyathetha kuye, yomnye, kwaye ke kufuneka ukuba akholwe; ngenxa yoko, ukuba uyakholelwa kuThixo, lowo ufuneka ukuba enze njalo. -IPOPE BENEDICT XIV, UbuGcisa bobuNtu, V. III, p.390
Abo bawele kolu lonwabo bajonga phezulu kwaye bakude, bayasigatya isiprofetho sabazalwana noodade babo… -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-97
Uluntu ngokuchaseneyo neSityhilelo saBucala
Ukubala ukuya eBukumkanini yiwebhusayithi, ethobela izigqibo zeCawe, ebeka into ebizwa ngokuba "kukutyhilwa ngasese" -imiyalezo ethunyelwe ivela ezulwini ukusinceda ukuba siphile ngokuzeleyo kukutyhilwa nguThixo kwiyure yethu esiyinikiweyo eMhlabeni. Isityhilelo "sabucala" sihlala senziwe nguThixo ukuba sisasazeke kwindalo iphela kwaye samkelwe. Ngamanye amagama, ayenzelwanga ukuba ibe "ngasese." Ngesityhilelo "sabucala", sinayo iRosari enikwe nguMama wethu kuSt. Dominic; Ukuzinikela kweMigqibelo yokuQala kunye nesilumkiso seMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kwiNkosazana yethu yaseFatima. Sinesilumkiso sendlala ngoMninimzi waseLa Salette, ukuba abantu mabaqhubeke bemcaphukisa uThixo, kunye nomnqweno kaKristu weCawa yeNceba kaThixo kunye neChristmas Mercy Chaplet ngokutyhila kwakhe eSt. Faustian Kowalska-ukubala nje abambalwa. Ukungahoyi sonke isityhilelo sabucala ngaphandle kokukunika ingqalelo kungasibeka emngciphekweni omkhulu wokungahoyi iNkosi uqobo.
Igama "ngasese" linikezelwe kwisityhilelo esiphuma ezulwini ukuyichaza kunye nesityhilelo esidlangalaleni Idiphozithi Fidei (Idiphozithi Yokholo): Isibhalo kunye neNkcubeko zichazwe ngokucacileyo kuyo yonke iminyaka yimagisterium. Kolu thyulo lwasesidlangalaleni, sinesiseko esiqinisekileyo- isiseko esiluqilima esingasoloko simi phezu kwaso ngokukhuselekileyo, nokuba sekumnyam 'entla, kunye nomqadi okhuselekileyo ongasikhuseli kumawa ayingozi. Umxholo wesityhilelo esidlangalaleni, uwedwa, ufuna ukuqinisekiswa kokholo lobuthixo (njengamandla amangalisayo) kuyo yonke imiphefumlo, kwaye akukho sityhilelo sabucala sinokongeza kwimixholo yawo. Ewe kunjalo, nantoni na equlethwe kwesi sityhilelo sikawonke-wonke sikhona ngokupheleleyo ezithile; nantoni na ichasene nayo ngokupheleleyo buxoki, kwaye akusayi kubakho sityhilelo sasesidlangalaleni sitsha kude kube sekupheleni kwexesha.
Ungaze uyilibale loo nto.
Kodwa musa ukuzenza ngathi sele ugqibile! Ikhatheknoloji yeCawa yamaKatolika ithi:
“Asiyondima [ekuthiwa 'yeyabucala' izityhilelo '] ukuphucula okanye ukugqibezela isityhilelo sikaKristu, kodwa ukukunceda uphile ngokuzeleyo ngalo kwixesha elithile lembali. Bekhokelwa ngumantyi wecawe, i ubalo bantu lubalwe Uyayazi indlela yokuqonda nokwamkela kwezi zityhilelo nokuba yintoni na ebiza ubizo lukaKrestu okanye abangcwele bakhe eCaweni. . . ” (Icandelo lama-67)
Kuyo yonke into ayithethayo nayenzayo, umntu unyanzelekile ukuba alandele ngokuthembekileyo into ayaziyo ukuba ilungile kwaye ilungile. (§1778)
ICatechism yeCawa yamaKatolika iyayenza hayi bathi: "Umntu unyanzelekile ukuba ayilandele ngokuthembekileyo loo nyaniso ikhutshwe ngokucacileyo kukutyhilwa esidlangalaleni kokholo." Kodwa oku kugwegweleza kwimfundiso yeCawa, ngelishwa, yinto kanye umntu ayivayo ngamanye amaxesha kwizangqa ezininzi zamaKatolika namhlanje nanini na xa kwabelwana ngemiyalezo engxamisekileyo yaseZulwini: “Oo, sisityhilelo sabucala? Pshh! Ndizophendula nangona kunjalo ndizive ngathi ndiyaphendula, emva koko; enkosi kakhulu kunye nosuku oluhle kuwe! ”
Oku kugqogqa amandla alo phantse konke kuthetha uxanduva lwethu luzuko njengoonyana bakaThixo ukuba silandele izazela zethu kwaye silithobele ilizwi loMoya rhoqo, kubandakanya imiyalo yezulu eqhubekayo, iintsikelelo, izilumkiso kunye neziyalo. Ukusukela nini enye inyani yokungabinisihlahla esicacileyo sedipozithi yokholo ngandlela ithile ingenanto yexabiso? Ukusuka nini le nto ikhusela umKatolika kuyo nayiphi na into enokuba nesibophelelo — nkqu esingqongqo nesingxamisekileyo — sokuba aphendule?
Ukuba asizukuhamba ngesibindi kwaye ngesibindi siqhubele phambili kwinto iingqondo neentliziyo zethu eziqinisekisiweyo ziyinyani ngokhuthazo lwaseZulwini, ke asingoba bantu abanyanisekileyo; ngokuqinisekileyo asinakuba ngamaKatolika anyanisekileyo ukuba asingobantu abanyanisekileyo. Ngelinye igama, ukutyhilwa esidlangalaleni ayisosimemo sokunciphisa ukukhula kwabantu kunye nenkululeko; sisixhobo sokukhuthaza bobabini.
Ke, zihlobo ezithandekayo, yima ngokuzithemba kwesi siseko singenakoyiswa esinaso ekutyhilekeni esidlangalaleni: iqulethwe esiBhalweni, ikhula ngeNkcubeko eNgcwele, kwaye itolikwe ngokuqinisekileyo yi-magisterium. Ungaze ulinge, ngengcinga, ngelizwi okanye ngesenzo-ngokugunyazisa okanye ngokushiya-uphikise ezi siseko (nokuba ucinga ukuba isityholo sangasese siyakucela ukuba wenze njalo). Kodwa sukuvumela isiseko ekukuthinteleni ukuba unyukele phezulu nangoku.
Xa izulu lithetha, kubalulekile. Kwaye izulu limemile kuthi namhlanje kunanini na ngaphambili embalini. Into iyeza. Into engazange yabonwa ngaphambili embalini. Into imbali ngokwayo eyifunayo njengesithsaba sayo. Izulu liyathetha kuwe.
Ngolwazi oluthe kratya, malunga nokutyhilwa kukawonke-wonke nangabucala, bona iphe. 48-69 ye Isithsaba sobungcwele kunye ne-93-95 ye Isithsaba seMbali NguDaniel O'Connor.
Jonga kwakhona okulandelayo nguMark Mallett, umbhali we ILizwi ngoku:
Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo
Ngaba Ungasityeshela iSityhilelo sangasese?
Isizathu sokuba umhlaba uqhubeke Ubuhlungu
ZaBabona kunye neMibono
Ukuba ufunda iphepha eliguquliweyo kule webhusayithi ukusuka kwisiNgesi sasekuqaleni, nceda ukhumbule ukuba kunokubakho iimpazamo elunqulweni.